रोचक – Enepali News
मानिसहरु मन शान्ति र भगवानको आशीर्वाद पाउनको लागी प्राय: मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने गर्दछन्। त्यस क्रममा धेरै पटक सानो-सानो गल्तीहरु गर्ने गर्दछौ, जसबाट पूजा र दर्शनको पूरा लाभ प्राप्त हुदैन । आज हामी तपाईलाई बताउछौ कि मन्दिरमा भगवानको दर्शन गर्ने समयमा के गल्ती गर्न हुदैन । १. मन्दिरमा दर्शन गर्दाको समय शान्त रहनुहोस्। मन्दिरमा भगवानको दर्शन गर्न जादा त्यस समयमा सधै यस कुराको ध्यान राख्नुहोस् कि मन्दिरमा ठुलो स्वरमा हास्ने र चिच्चाउनु ठीक मानिदैन । २. सही परिक्रमा गर्नुहोस्। मन्दिरमा भगवानको दर्शन गरिसकेपछि परिक्रमा गरिन्छ तर अज्ञानताको कारणले मानिसहरु उल्टो परिक्रमा गर्ने गर्दछन् । परिक्रमा सधै बायाँबाट दायाँ गर्नु पर्दछ । भगवान शिवको आधा परिक्रमा गर्नु हुदैन । ३. मन्दिरमा प्रवेश गर्दाको समय आफ्नो साथ कुनैपनि यस्तो चिज नालानुहोस् जसलाई शास्त्रमा वर्जित मानिएको छ । जस्तै छालाको बेल
हिन्दू धर्मअनुसार आइतबार सूर्यदेवको बार मानिन्छ । सूर्यदेवबाट प्रकाश, आरोग्य, प्रतिष्ठा प्राप्त हुने छ भने दुष्टहरुको निवारण हुनेछ । नवग्रह शान्ति विधानमा मात्र सूर्योपासनाबाट सबै ग्रहको शान्ति मिल्ने उल्लेख छ । किन भने सूर्यदेवलाई नौ ग्रहको मुख्य ग्रह अर्थात राजा मानिन्छ । तपाईंले जीवनमा कुनै तनाव झेलिरहनु भएको छ भने सूर्यदेवलाई प्रसन्न पारेर आफ्नो सबै तनाव निवारण गर्न सक्नु हुनेछ । सूर्यदेवको कृपाबाट व्यक्तिलाई समाजमा मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । साथै, नोकरी तथा भाग्य सम्बन्धी समस्या सूर्यको पूजाबाट टाढा हुनेछ । हरेक दिन बिहान सूर्यलाई नमस्कार गरेमा बल, बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज, पराक्रम तथा दिव्यता प्राप्त हुनेछ । आइतबारको दिन व्रतालुहरुले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ । साथै खानामा नुनतेल मिसाउनु हुँदैन । व्रत बस्नेहरुले रातो वस्त्र लगाउँदा सूर्यदेव प्रसन्न हुन्छन् भने पूजा गर्दा
हिन्दुधर्म अनुसार लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनेर पुज्ने गरिन्छ । लक्ष्मीलाई सुन्दरताको साथै सफल सौभाग्य,समृद्धि र सम्पन्नताको रुपमा पनि मानिन्छ।लक्ष्मीलाई खुसी पार्न सके धनी भइन्छ भन्ने हिन्दुधर्मावलम्बीहरुको विश्वास रहेको छ । त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई लक्ष्मी मातालाई कसरी खुसी पार्ने र सम्पन्न बनाउने भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ । १) धनका मालिक भनिएका कुबेरको मूर्ति घरमा राखे लक्ष्मी खुसी हुन्छिन् भन्ने विश्वास रहेको छ । कुबेरले लक्ष्मीको रक्षा गर्ने भएकोले कुबेरको मूर्ति राख्ने ठाउँ सफा हुनुपर्ने छ । २) श्रीफल भनिने नरिवल चढाउँदा लक्ष्मी खुसी हुन्छिन् भन्ने विश्वास रहेको छ । धर्मशास्त्र अनुसार श्रीफल भनेको पनि लक्ष्मी नै हुन् । ३) पारोले बुनेका चित्र वा मूर्ति घरमा राख्नु फलदायी मानिन्छ भने पारोले बनाएका जुनसुकै कुराहरु राख्नु लक्ष्मीको लागि विशेष मानिन्छ । ४) समुन्द्रबाट उ
ज्योतिष शास्त्रले कुण्डलीमा ग्रहको प्रभाव अध्ययन गरेर भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार निम्न उल्लेखित युवतीले प्राय धनि पति पाउने गर्छन्। मेष राशि हुने युवतीहरुको भाग्य धेरै राम्रो हुन्छ भने जहिले पनि सुख मात्रै मिल्छ। यस राशि हुने युवतीहरुलाई धेरै माया गर्ने धनी पति मिल्छ। यति मात्र नभई यस राशि हुने युवतीहरुलाई के कुरा पनि मान्ने पति मिल्छ। कन्या राशि हुने युवतीहरु पनि धेरै भाग्यशाली हुने गर्छन्। यस राशि हुने युवतीहरुलाई पनि आफूले खोजेको जस्तो पति मिल्ने गर्छन्। आर्थिक रुपमा धनि मात्र नभई विवेकमा पनि धनि पति मिल्ने हुँदा कन्या राशि हुने युवतीहरुको वैवाहरिक जीवन धेरै सुखद हुन्छ। धनु राशि हुने महिलाहरु आफै पनि छिट्टै धनि बन्ने गर्छन्। यस्तै यस राशि हुने युवतीहरुलाई धनि मात्र नभई धेरै माया गर्ने पति मिल्ने गर्छ। सामाजिक रुपमा धेरै प्रतिष्ठा भएको
मानिसहरु घरलाई आर्कषक र राम्रो बनाउनको लागी घरमा विभिन्न किसिमका आकर्षक खालका सामानले सजिसवाज गर्ने गर्दछन्, जसले घरलाई निकै सुन्दर बनाएको हुन्छ । तर वास्तु शास्त्रमा घरमा कस्ता समान राखेर मात्र सजाउन मिल्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । घरमा राख्न नहुने समान राखेमा घरमा निकै हानी गर्दछ । हिन्दुशास्त्रमा मात्र नभएर चिनियाँ संस्कृतिमा पनि वास्तुशास्त्रको विश्वास गरिएको छ । घरको सुख शान्तीको लागी चीनमा धेरैले चीनमा फेंगशुई घरमा सजाएर राख्ने गर्दछन्। यसैप्रति त्यहाँका नागरिकले विश्वास गरेका छन्, उनीहरुको धारणा के छ भने फेंगशूई घरमा राख्नाले घरमा सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ । पछिल्लो समयमा फेंगशूई प्रति केहि नेपालीहरुले पनि आकर्षितको साथमा यसप्रति विश्वास लिन पनि थालेका छन् । १ लाफिङ बुद्ध कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन् भने लाफिङ बुद्ध घरमा राद्यन सक्नुहुन्छ, यसलाई
काठमाडौ साउन ६ । कुनै पुजा आजा गर्दा हामिले भगवन गणेशजीलाई सम्जने गरिन्छ मंगलबारको दिन भगवान गणेशजीको पूजा गर्दा मिल्ने छ । लाभै लाभ हरेक मानिसहरुले मंगलबार भगवान गणेशको पूजा गरेकै हुन्छन् । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ । धर्मशास्त्रका अनुसार यी काम मंगलबार गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन्। मंगलबार कुखुरा वा अन्य प‌ंक्षीको हत्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मानिन्छ । मंगलबारको दिन माछा खाँदा तपाइँलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मानिन्छ । मंगलबार मासु सेवन गर्नु हुँदैन । मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दा तपाइँको क्रोधमा वृद्धी हुन्छ ।
निःसन्तानलाई सन्तान दिने , जोडी नभएका युवा युवबतीलाई जोडि मिलाइदिने, जनविश्वासले प्रसिद्वि पाएको नुवाकोटकै चर्चित र प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थल दुप्चेश्वरमा धान्यपूर्णिमाको अवसरमा लागेको मेलामा यस वर्ष डेढ लाख जनाले मेला भरेका छन्।यस वर्ष मेला साताव्यापी रुपमा लागेको थियो।सदरमुकाम विदुरदेखि ४५ किलोमिटर उत्तरमा रहेको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ६ अर्थात् साविकको राउतबेशी गाविस वडा नं. ८ स्थित तादी खोलाको किनारामाथिको पहरोमा रहेको दुप्चेश्वरमा यो वर्षको मूख्य मेला आइतबार सम्पन्न भएको छ । यस वर्ष मेलामा भक्तजनहरुको संख्या गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको मेला आयोजक समितिले जनाएको छ।मेलामा सात दिनसम्म एक लाख ३० हजारले सहभागिता जनाएको दुप्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले जानकारी दिए।उनका अनुसार मेलामा सबै किसिमका मानिसहरु आएर दुप्चेश्वरमा पुजापाठ गर्नुका साथै दूध तथा न
प्रत्येक मानिसको जीवनमा सफल हुने चाह रहेको हुन्छ र यसका लागि मानिसले मेहनत पनि गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाँही सही मार्गनिर्देशनको कमीले त्यो मेहनत बालुवामा पानि हालेसरी खेर जान्छ । हामी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसैले सफलताको कामनासहित जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामीले दशवटा सुत्रहरु प्रस्तुत गरेका छौँ । यी सुत्रहरुको प्रयोगले तपाईको जीवन साच्चै नै सफल हुनेछ । १. सफल व्यक्तिको जीवनीबाट पाइने एउटा ज्ञान भनेको ‘स्याक्रिफाइज’ हो । त्यसैले केही ठूलो पाउन स–साना कुरा गुमाउनपर्छ भनेर नडराउनुहोस् । त्यस्तै टिभी, इन्टरनेट, अनावश्यक घुमघाम र खराब बानीबाट टाढा बस्नुहोस् र त्यस समयलाई अध्ययन तथा आवश्यकता अनुसार सही सदुपयोग गर्नुहोस् । २. आफू सहि बाटोमा छु कि छइन भनेर सधैभरी सचेत रहनुहोस् । यदी गलत बाटोमा हुनुहुन्छ भने जति मेहनत गरेपनि त्यसले तपाईको लक्ष्यमा केही मह
मानिसको जन्मबार र समयबाट भविष्यवाणी हेर्न गर्छन्, कतिपयलाइ धार्मिक विश्वास हुन्छ भने कतिपयले बिश्वास गर्दैनन्। आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहन्छन भन्ने धार्मिक शास्त्रमा उलेखित गरिएकाे छ। आइतबारको दिन सूर्य, सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र, मंगलवार मंगल, बुधवार बुधको प्रभाव, विहीबार वृहस्पति, शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी, शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । तपाईको आयआर्जनमा यी ग्रहहरुले प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छन भन्ने विषयमा बताउन जाँदै छौँ। आईतबार: यसबार जन्मिने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् र आयु पनि लामो हुन्छ । कम बोल्ने र शिक्षामा अगाडी हुन्छन्, धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुशी राख्न खाेज्छन् । आइतबार जन्मिने महिला दान-पुण्य गर्ने र चलाख हुनेछन्। यिनीहरुको बढी रिसाउने बानी भएपनि धेरै मान्छे
कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्य कुराको खुलासा पनि तपाईको कुन्डलीले गर्छ ।तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ । जसअन्तर्गत तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ । अर्थात राशिको अन्तर्यमा एक खास खुवी हुन्छ, जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ त्यो खुवी स्वतः उसभित्र प्रेवश गर्छ । यो आलेखमा तपाईको राशिको एक महत्वपूर्ण खुवीबारे उल्लेख गरिएको छ । ज्योतिषीअनुसार जति पनि राशि छन् ती सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, त्यसमध्ये पनि ४ वटा राशि यस्ता छन्, जो वास्तवमै धेरै बलिया हुन्छन् । यी राशिहरु यती बलवान हुन्छन् की, त्यहाँ अरुले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मेष राशि यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेष राशि छ ।